डटोंबोरी शीर्ष 10 चीज गर्न को लागी | Experience Japan
› ब्लग Nepali › डटोंबोरी शीर्ष 10 चीज गर्न को लागी
डटोंबोरी शीर्ष 10 चीज गर्न को लागी
Dotonbori शीर्ष 10 कुराहरूके गर्न
एक ठूलो Dotonbori पसल Signboardसंग एक तस्वीर लिनुहोस् 1
Dotonboriजीवन भन्दा ठूलो हो कि धेरै प्रसिद्ध दोकान signboards छ! रेस्टुरेन्ट Kani Doraku, नंग्रा सार्दा भित्र आगंतुकों स्वागत संग एक विशाल केकडा छ! अर्को रेस्टुरेन्ट, Zuboraya, झटका माछा को आकार मा कागज लालटेन रोशनी छ! विशाल octopi ओसाका मनपर्ने takoyaki वा पस्त octopi बलमा भित्र पाउन सकिन्छ कि धेरै रेस्टुरेन्ट को बाहिर, विज्ञापन मा लुकेको! Glico मानिस भनिन्छ – अन्य संकेत सुशी को विशाल मोडेल, ड्रेगन र विजय मा एक खेलाडी अनुहारमा समावेश गर्नुहोस्।
2. ठूलो उज्यालो विज्ञापन र नियन लैम्पमा हेर्दै आनन्द
Dotonbori पनि ‘कहिल्यै सोता एक सडक’ को रूपमा जानिन्छलिनुहोस्,र किनभने यी signboards कहिल्यै बन्द कारण एक किन छ! रंग र रोशनी बन्द वरपरको भवनहरु धेरै चमक देखिन जब यी विज्ञापन देखेर राति सबै भन्दा राम्रो छ। केही गर्दा केही आन्दोलनहरु छ, अरूलाई विभिन्न विज्ञापन बीच धकेल्न गर्दा, निश्चित तस्बिरहरू छन्। पसलहरूमा समेत सम्पूर्ण पक्ष तिनीहरूलाई संलग्न नियन दीपक छ। माथि उल्लेख ठूलो signboards संग मिश्रित, यो भयानक दृष्टि कुनै पनि ओसाका पर्यटक लागि हेर्न पर्छ छ।
3.स्थानीय खाना खाने
एक जापानी भनाइ छ’तपाईं ओसाका मा ड्रप सम्म Kuidaore।’ Kuidaore भोजन फिजूलखर्ची द्वारा आफूलाई बर्बाद गर्न अनुवाद र धेरै मानिसहरू Dotonbori भर्खरै गर्न सबै भन्दा राम्रो ठाउँ हो भन्ने विश्वास गर्छन्। सागर नजिक रहेको, ओसाका क्रूज सुविधा समुद्री भोजन र ताजा माछा गर्छ। को गर्मी महिनामा पनि भइरहेको न्यानो तापक्रम बासिन्दा मतलब यहाँ आफ्नो व्यञ्जन छान्न गर्न ताजा तरकारी को एक ठूलो चयन गरेको छ। ताजा सामाग्री एक बलियो, tastier पकवान बनाउन धेरै स्थानीय शोरबा भोजन आनन्द। Dotonbori मा खाद्य पसलहरूमा फैंसी रेस्टुरेन्टमा खाना खोखे देखि दायरामा र यी धेरै खुला छन् 24/7!
4स्थानीय मिठाई र मिष्ठान्न प्रयास गर्नुहोस्
‘kuidaore’ गर्नक्रममा आफूलाई पूर्ण खाना, तपाईं एक मिठाई … वा दुई गर्न आवश्यक हुनेछ। Dotonbori यस्तो आइसक्रिम, tarts, cheesecake, कुकीहरू, पेस्ट्री र अरूलाई रूपमा मज्जाको व्यवहार, सेवा धेरै मिठाई आउटलेटहरू दावा। तपाईं एक ओकोनोमियाकी वा जापानी पैनकेक पनि रुचि। Hozenji सान pei र अन्य रेस्टुरेन्ट को सुविधा तपाईं ग्रिल गर्न सक्छन् आफैलाई कहाँ! के तपाईं पहिले देखेका थियो कहिल्यै मिठाई र स्वाद को दायरा पाउनुहुनेछ रूप मा, Glico कैंडी स्टोरमा टाउको गर्न निश्चित गर्नुहोस्। एक स्थानीय मनपर्ने को takoyaki स्वाद pretz, जो केवल ओसाका शहर हुन फेला सक्छ!
5 को लागि 100 येन पसलहरुबाहिर
Dotonbori वस्त्र आउटलेटहरू बाट स्मारिका खोखे गर्न लिएर धेरै पसलहरूमा भर छहेर।यी मा, तपाईं सानो तपाईं फिर्ता तपाईंसँग लाग्न सक्छ कि यस्तो मिठाई, स्थिर, साना उपहार र मूर्तिहरू ‘Biliken राम्रो भाग्य को ओसाका भगवान’ को रूपमा, trinkets पाउन सक्षम हुनेछ। तपाईं यो जापानी मनोरञ्जन रुचि राख्नुहुन्छ भने पनि कार्टून र Manga पसलहरूमा छन्। तपाईं को छैन सुनेका सक्छ एक दोकान 100 येन दोकान, जहाँ सबै 100 येन छ! यी जापान धेरै लोकप्रिय छन् र तपाईं कहीं फेला पार्न सक्नुहुन्छ धेरै प्यारा र अद्वितीय वस्तुहरू पाउनुहुनेछ, वा त्यो सस्तो मूल्य लागि!
6एक जापानी नाटकीय प्ले
विश्वका धेरै थिएटर छिमेक होहेर्नुहोस्;पश्चिम अन्त, ब्रडवे, लस भेगास। Dotonbori तिनीहरूलाई मध्ये एक छ जापान मा पुरानो थिएटर केही होस्ट रूपमा। यो छिमेक मा धेरै थिएटर मध्ये प्रदर्शन र प्रदर्शनमा नाटकहरु को दायरा पाउन सक्नुहुन्छ को जापान सपनामा अभिनेता। अरूलाई Kabuki, प्राचीन जापान देखि मास्क र नृत्य प्रयोग थिएटर को एक शैली प्रदर्शन गर्दा जस्तै Yoshimoto थियेटर केही थिएटर, मात्र कमेडी नाटकहरु देखाउने। प्ले टिकट आदेश गर्दा केही थिएटर खाने भोजन प्रस्ताव, त्यसैले किन एक रात Dotonbori बाहिर आनन्द छैन?
7 एक परम्परागत Puppet देखाउनुहोस्हेर्नुहोस्
Dotonbori को थिएटर मा विशेष नाटकहरु प्रकार को एकbunraku छ। यो कहाँ कठपुतलीहरू अभिनेता सट्टा कथा बताउन प्ले एक प्रकार हो। को कठपुतलीहरू सामान्यतया गर्दा समय-सम्मान संगीत सँगसँगै, परम्परागत नाटकहरु वा folktales बाहिर कार्य। यो कला फारम को 17 औं सताब्दी मा यहाँ उत्पत्ति धेरै Dotonbori यी शो मा जानुहोस्। तपाईं सामान्यतया राष्ट्रिय Bunraku थियेटर प्ले यी शो को एक पाउनुहुनेछ।
8 एक ज्याज संगीत सत्र सुन्नुहोस्
भएपछि ओसाका अमेरिकी र फिलिपिनो बैंड भ्रमण बाट ज्याज संगीत सुने, यो एक प्रसिद्ध पछिल्लो समय र सांस्कृतिक गतिविधि भए। ज्याज हल र क्याफेहरू र अन्तर्राष्ट्रिय ज्याज संगीतकार संग लहरै गर्न प्रयोग Dotonbori त्यहाँ खेल्न निमन्त्रणा थियो। यसको लोकप्रियता जापानी ज्याज भनिने नयाँ विधा मा परिवर्तन, अन्य पश्चिमी देशहरूमा फिक्का पछि ज्याज यहाँ जारी राखे। संगीत को यो शैली को प्रेम कहाँ पुरानो र आधुनिक प्रभाव स्थानीय र आगंतुकों उस्तै द्वारा मनाइन्छ छन् आज, मा वहन। नयाँ Suntory पाँच पट्टी जाँच गर्नुहोस् Tenjin किनमेल सडक मा तपाईं मान्छे एक सुन्दर ज्याज बिट गर्न grooving हेर्न चाहनुहुन्छ भने!
9 साथ नहरटहलने
Dotonbori नै एक नहर छेउमा स्थित छलिनुहोस्,र चासो धेरै कुराहरू यो पानी जस्तो विचरण साथ आउँदैन। तपाईं फोटोग्राफी लिएर रुचि हो भने, तपाईंले रोशनी को पानी जस्तो सतह मा प्रतिबिम्बित कसरी विगतका जान सक्नुहुन्छ। तपाईं ओसाका को नाइटलाइफ हेर्न चाहनुहुन्छ भने, नहर साथ एक पैदल प्रत्यक्ष संगीत प्रदर्शन गर्ने सँगसँगै र नजिकका पसलहरूमा देखि सुनिन्छ गरिनेछ। तपाईं एक मान्छे वा केटी प्रभावित गर्न चाहनुहुन्छ भने, यहाँ एक पैदल अन्वेषण र तपाईं दुवै को लागि एक धेरै रोमान्टिक वातावरण प्रदान गर्न धेरै रोचक स्थानहरू प्रदान गर्नेछ।
10 Hozen-जी मन्दिर
Dotonbori को आधुनिक सुविधाहरू माझमा, यो bygone युग आउँछ भने देखिन्छ कि लेन छ। सबै सडकमा जापान मा इडो अवधिमा थिए Hozen-जी Yokocho लेन, ऐतिहासिक दोकान मोर्चों र नै पत्थर बनाइएका छ लेन संग सजाया छ। तपाईं साथ जारी छ भने, तपाईं Hozen-जी मन्दिर पाउनुहुनेछ। यहाँ भ्रमण गर्न एक सुन्दर कारण तिनीहरूले रोशनी रूपमा पनि अधिक सुन्दर सूर्यास्त वरिपरि छन् जो मन्दिरमा वरिपरि कागज लालटेन, हेर्न र यो पवित्र साइट आगन्तुकहरूलाई न्यानो आभा बन्द दिन छ।